Home Wararka Maxaa Keenay in Mudullood ka Shiraan Dawladda Xelligaan?
Maxaa Keenay in Mudullood ka Shiraan Dawladda Xelligaan?
Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay siyaasadda marin habowday ee ay daowladda Farmajo ku dhaqanto waa dareen cid waliba halkeeda ugu tagay oo abuuray cabsi dhab ah iyo dalku galo xaalad mugdi ah.
Kulanka Beesha Mudullood ee Xamar ku qabsoomay, Qeylida Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada GalMudug Axmed Ducaale Xaaf, MW Axmed Madoobe ee Jubbaland, MW Gas ee Puntland, hooggii iyo Dhibaatadii K/Galbeed iyo Dagaallada ee ka socda Galgaduud iyo Mudug waa astaamo muujinayo in dalka dagaal sokeeye waddadeedii uu gacta saaray.
Maanta ka hor Xamar kama maqlin waa in dowladda la iska celiyaa oo dadku shacbiga heerkaaas magaarsiisaneyn dareenka ay ka qabaan dawladda, balsa maanta dadka Somaliyeed dalka meeshey doonaan ha ka joogaane waxaa u muuqata sansaan colaadeed oo ay dad badani u arkaan in iyaga duullaan lagu yahay.
Reer Puntland oo cabsi ay ka qabaan dowladda FS xeray baraha laga soo galo Puntland ee cir iyo dhul, iyadoo baaris ku soo rogtay cidkasta oo soo gashaa Puntland. Reer Jubaland oo sheegay in Farmajo iyo Mareexaan ay duulaaan ku yihiin dowladnimada dadka reer jubaland. Reer GalMudug oo uu madaxdweynahooda sheegay in loo socdo in loo soo qab qabto oo sida Roobow la yeelo, inkastoo uu hanjabaad kudaray inaysan Galmudug ahayn Baydhabo, oo uu ula jeeday inay dagaallaami doonaan sida ay reer Jubaland ku baaqeen.
Maxaa kenay in Muddullooda hadda ka shiraan dowladda?
Mudullood ayaa markii ugu horreysay muddo laba sano ah ka shiray khatarta uga iman karta dowladda sidii la isaga yareyn lahaa ama loo suulin lahaa. Qabiilada Marrexaan iyo Sacad Habargedir oo la isku hubeeyey ayaa dagaalka hoaryba u bilaabay kalana maraya tiro badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Dhamaan arrimahan kore marka lagu daro Hiraabka Xamar jooga oo isku duuban oo dareemay inaysan sidaan ku sii jiri Karin xaaladda dalka oo aykhasab tahay inuu isbadal dhaco kadib markii:-
Canshuurta ay Farmajo iyo Kheyre qaataan lagu kordhiyey iyadoon wax badal ah loogu sameyn.
Iyadoo shabaab, Daacish iyo Dowladda aysan u kala rooneyn oo ay cid waliba shacabka baad ka qaadato, magacyada Canshuur iyo Zakawaad midkii la doono ha lagu sheegee.
Iyadoo beesha Caalamka ay ku fiirsaneynso dhibaatada lagu hayo dadka Somaliyeed , kuna taageeraan dawladda Farmajo iyo Kheyre.oo aysan marnaba ka hadal dhibta lagu hayo.
Gaajo iyo Macluul xoog leh oo soo wajahday dadka reer Muqdisho.
Ayaa waxaa ka dhashay inay dadku ku baaqaan inay isku tashadaan oo ay danahooda u hawlgalaan.
Haddaba kulankii khaaska ahaa oo ahaa kii kowaad oo ay qabtaan mudulood oo aan saxaafadda loo ogoleyn ayaa waxaa la isla gartay:
In dowladdu ay dumineyso dhammaan dowlad goboleedyada si u talagal ah.
Inay siyaasadda dawladdu ay dalka dib ugu celineyso dagaal sokeeye iyo walaalo is dila, iyo iyadoo burburineysa dhammaan wixii la soo tacbay ilaa Carta.
In dowladdu dadka ay caburineyso oo xurriyatul qowlkii ku caddeyd distuurka la iska tuuray waayo dowladdu waxay amartay inaan Hoteellada Xamar lagu qaban Karin kulan bulsho iyo inaan la hadli Karin oo bannaanbax la sameyn karin
In Barlamankii loo diiday inuu shaqeeyo oo uu dowladda la xisaabtamo ama lala socda wixii ay qabatay marka la babardhigo ballanqaadkii kalsoonida lagu siiyey.
In dowladda ay ka shaqeyneyso sidii ay uga baaqsan la hayd inaan doorasho haba yaraatee la qaban 20/21 oo meel iska dhigtay howlihii lagu diyaarin lahaa in dalka doorasho ka dhcdo.
Inay xaaladdu u socoto in dalka uu ka hana qaado nidaam kalitalis ah.
Haddaba kulanka mudulood ayaa gabagadiisii waxaa hadal ka jeediyey MW hore ee Somaliya Xasna sheekh oo u muuqday inuu wax badan xeerinayo lexajecla badanina ay dalka ka hayso ayaa u sheegay kulanka “inay xaaladda dalka ay kala tashan doonaan, lana kulmi doonaan madaxda dowladda, wixii kasoo baxana ay dib ugu soo celin doonaan shirka iyo Beesha Mudulood si ay go’aan uga qaataan”.
MW Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka u sheegay in la is dejiyo oo aan la fududaan dowladdana ay gaarsiin doonaan dareenka, welwelka iyo cabsida shacbiga Muqdisho ay qabaan, isagoo ka rajaqaba inay dowladdu dhageysan doonto, kana qaadan doonto tallaabada ku haboon ee saxda ah.